Dahabshiil Group Oo lagu Majeertay Deeq Lacageed dhan $100,000 oo ku wareejiyey Dugsiga Farsamada Gacanta ee Berbera | Somaliland Post
Home News Dahabshiil Group Oo lagu Majeertay Deeq Lacageed dhan $100,000 oo ku wareejiyey...
Berbera (SLpost)- Shirkadda Dahabshiil Group ayaa ugu deeqday Dugsiga Farsamadda Gacanta ee Berbera (BerberaTechnical Collage) Lacag dhan $100,000 oo Dollar, taas oo noqonaysa deeqdii ugu badnayd ee Dugsigaasi ka helo ganacsata dalka.
Mulkiilaha Shirkadaha Dahabshiil Group Xaaji Maxamed Siciid Ducaale (Dahabshiil), ayaa lagu ammaanay doorka shariifka ah ee uu ka qaatay dib u dhiska dugsiga farsamada gacanta Berbera oo dib u habayn lagu wado.
Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo ka tirsan guddida dib u dhiska dugsiga ayaa sheegay in dugsiga oo ay dib u dhisayso dawladda Jarmalku ay bixinayso lacag ka badan sideed Boqol oo kun oo dollar iyagana looga baahan yahay afar boqol iyo konton kun oo dollar, islamarkaana Xaaji Maxamed Siciid Dahabshiil noqday shakhsiga koobaad ee bixiyay boqol kun oo ka mid ah lacagtan waxaanu ku ammaanay deeqsinimada​.
“Reer Berberow ninka aan maanta u ducaynayo ee aan gabi ahaan leeyahay dambigaaga If iyo Aakhiraba Alle ha dhaafo oo runtii degaannimo caddaystay waa Maxamed Siciid Dahabshiil. Aad iyo aad baanu Maxamed Siciid u ammaanayna, ninkaasi deeq aanay cidina na siin oo aanan ku xukumin ayuu isku xukumay, ta hawsha noo dhaqaajisayba isaga weeye. Ninkaasi waa nin Adduunka leh, dad baa jira ganacsato ah oo Adduunka leh oo aan calfanayn ee ubadkoodu cuni doonan ninka Illaahay tasarrufkii buu siiyay, ninkaa haddii hore wax iiga gaadheen xaal iyo raalli gelin wax badan baa iiga kordhay, waa ninka iskuulkan iyo reer Berbera lexejeclada ka leh oo Boqol kun oo dollar ($100,000) ayuu na siiyay, ninkaasi waa lambar kow,” ayuu yidhi Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble​.
Muuqaalkan Hoose ka Daawo hadalka Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble